शेयर बजारमा ‘अफ सिजन’ को हावा, अब बढ्ला त ? - Aarthiknews
शेयर बजारमा ‘अफ सिजन’ को हावा, अब बढ्ला त ?
काठमाडौं । नेप्से र शेयर कारोबार निरन्तर घट्नुलाई लगानीकर्ताहरु ‘अफ सिजन’ को चिसो हावा चल्न थालेको चर्चा गर्न थालेका छन् । नेप्सेमा सूचीकृत अधिकांश कम्पनीले लाभांश घोषणा गरिसकेकाले शेयर बजारमा अफ सिजन शुरु हुन लागेको उनीहरुको भनाइ छ ।
शेयरमा ‘सिजन’ र ‘अफ सिजन’ को चर्चा गरिन्छ । चैतअघिको समयलाई ‘अफ सिजन’ र चैतपछिको समयलाई ‘सिजन’ को रुपमा लिने गरिन्छ । शेयर बजारमा नेप्से र शेयर कारोबार रकममा आएको कमीलाई अफ सिजन शुरुवात भएको भन्न थालिएको छ ।
तिहारपछि बिहीबार खुलेको शेयर बजारमा २५ करोड ४३ लाख रुपैयाँको कारोबार हुनु र नेप्से पनि ३.१७ अंकले घट्नुलाई अप सिजनको शुरुवातको रुपमा लिइएको छ । नेप्से घटेर अहिले ११४६.१७ अंकमा आइपुगेको छ ।
यसभन्दा अघि सिजनमा शेयर बजारमा पनि हरियाली छाउने र रातोबाट हरियोमा परिणत हुने विश्वास गरिँदै आएको थियो । तर, यो वर्ष भने सिजनमा पनि शेयर बजार बढ्न सकेन र हरियो हुन सकेन । विगत एक दशकको अवधिलाई हेर्ने हो भने पनि एक दुई अपवाद बाहेक वैशाखदेखि शेयर बजार बढेको देखिन्छ ।
यो वर्ष पनि बढ्ने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, त्यो समयमा पनि शेयर बजार बढ्न सकेन । केही समय अघि अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले शेयर बजारलाई सिजन र बेसिजनको काउलीको भाउसँग तुलना गरेका थिए । उनले शेयर बजारलाई हरेक नेपालीको भान्सामा पाक्ने काउलीको भाउसँग तुलना गर्दै मौसममा काउलीको भाउ घटने गरेको र बेमौसमा काउलीको भाउ बढ्ने अनुभव सुनाएका थिए । शेयर बजार पनि दैनिक उपभोग्य वस्तु काउलीको भाउजस्तै भएको उनले बताए पनि यस वर्ष भने सिजन र अफ सिजनको फरक लगानीकर्ताले छुट्याउन सकेनन् ।
अर्थमन्त्री खतिवडाले केही दिन अघि एक सार्वजनिक कार्यक्रममा ‘सिजनमा काउलीको भाउ २० रुपैयाँ किलोमा पनि झर्छ । बेसिजनमा महँगिएर सय रुपैयाँ पनि नाघ्छ । शेयर बजार पनि त्यस्तै हो’ भनेका थिए । त्यसले पनि शेयर बजारको उतार–चढावलाई बुुझ्न सहज हुने उनको भनाइ थियो । तर, यसपटक भने सिजनमा पनि नेप्से उकालो लाग्न सकेन ।
यस वर्षको १२ महिना नै शेयर बजार बेसिजनको काउलीजस्तै भएको छ । पहिला–पहिला अर्थमन्त्रीले भनेजस्तै काउलीको भाउ र शेयर बजारमा कुनै तुलना गर्ने गरिए पनि यसपटक भने त्यस्तो तुलना गर्न नमिल्ने भएको छ । सिजन र बेसिजन दुवैउस्तै भएको छ ।
आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर बैंक तथा वित्तीय संस्थाले चैत मसान्तसम्मको वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्ने र त्यसले लाभांशको हिसाब किताबको पूर्वाअनुमान गर्न सहज हुने भएकाले शेयर बजार बढ्ने लगानीकर्ताको बुझाइ छ । अन्य कारणभन्दा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आम्दानी बढ्ने र त्यही अनुसारको लाभांश वितरण गर्न सक्ने अनुमान गरिने हुनाले त्यतिबेला शेयर बजारमा सुधार आउने अपेक्षा गरिन्छ । तर, त्यो अपेक्षा यस वर्ष भने पूरा भएन ।
अर्थमन्त्री खतिवडाले शेयर बजारप्रति नकारात्मक धारणा बनाउँदै आएकाले पनि लगानीकर्ता त्रसित बन्न पुगेका हुन् । बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य पुँजी (तरलता) अभावको समस्या सामाधान हुने अपेक्षा गरिए पनि त्यो अनुसारको काम भएन् । तरलताको अभाव अन्त्य भएमा शेयर धितो कर्जाको ब्याजदर घट्ने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, त्यो अपेक्षाअनुसारको काम हुन भने सकेन ।
आर्थिक वर्ष शुरु भएदेखि नै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लगानीयोग्य रकमको अभाव खेपिरहे । त्यसकै प्रभावका कारण शेयर बजार निरन्तर ओरालो लाग्दै आएको हो । लगानीयोग्य रकम अभावका कारण ७–८ प्रतिशत ब्याजमा पाइने शेयर धितो कर्जा १४–१५ प्रतिशत पुगेको छ । यसले पनि शेयर बजार उकालो लाग्न नसकेको हो ।